Maareeyaha shirkada WADAAGSAN Cali-Siciid Faadi oo diginin kama dambeysey ah la siiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ninkaan oo lagu yaqiin damac iyo fudeyd ilaa yaraantiisii wuxuu ka mid ahaa koox yar oo inqilaabkii Puntland ka sameeyey oo taageero ka haystay kooxdii Carta ee ay hogaaminayeen Jaamac Cali Jaamac iyo Siciid Cabdulahi Dani asagoo ka mid ahaa ardadii uu Siciid Dani iskuuladiisa wax ku soo baray, ku qorteen ergada jufadiisa reer Mahad markii reerkiisa laga heli waayey hal qof oo kursigaas ku fariista waayo reer Mahad waa ka soo horjeedeen in Puntland la dumiyo oo waxay taageersanaayeen Col Cabdulahi Yuusuf oo Carta aad uga soo horjeeday.
Cali-Siciid Faadi oo muddo 8 bilood ah ka shaqaynayey maareeyana looga dhigay shirkadda dhisaysa dekedda Garacad oo loo yaqaan WADAAGSAN mushaar fiicana ka qaata ayaa ku mashquulay iska horkeenka madaxda Shirkadda dhexdooda iyo Shirkadda iyo dadka deegaanka. Wuxuu caado ka dhigtay asagoo siyaasad ka dhexraadinaya una adeegaya qoyska Siciid Dani inuu weeraro joogta ah oo afka ah ku qaado odayaasha, Nabadoonada, Isimada iyo waxgaradka kale ee beesha Cumar Maxamuud.
Cali-Siciid Faadi waa nin aan khibrad siyaasadeed lahayn balse loo balanqaaday in laga dhigi doono xildhibaan heer federal ah iyadoo sharuud looga dhigay inuu soo fuliyo dhowr arimood sida curyaaminta mashruuca Dekadda Garacad oo qoyska Siciid Dani iyo Aaran Jaan ay damacsanyihiin inay la wareegaan.
Markii shaqada laga siiyey shirkadda iyadoo loo soo marayo Wasiirka Arimaha Gudaha Maxamad Dhabancad oo ay jufa hoose isla yihiin wuxuu markiiba bilaabay inuu weerar qaawan ku qaado la taliyaha amniga Qaranka ee Madaxweynaha dowladda federaalka oo kooxda AaranJaan iyo qoyska Dani ay cabsi badan ka qabaan. Cabdisaciid Muuse Cali-Koor oo waqti badan u soo huray sidii looga miro dhalin lahaa hirgalinta dekedda Garacad ayuu wuuxuu bilaabay inuu dacaayad joogta ah ku qaado suuqana u geliyo inuu dekedda caqabad ku yahay iyo inuu hal talaabo inay qaadaan u diiday.
Waxaa Cabdisaciid ka raali geliyey gefkii lagula kacay madaxda shirkada isla markaasna Cali-Siciid Faadina loo sheegay in aanu dhexgelin hawlo aanu waxbadan ka ogayn iyo in Cabdisaciid Muuse ahaa ninkii shaqada uu ku raaxaysanayo wax walba u huray.
Cali-Siciid Faadi waxaa markale loo adeegsaday inuu qalalaaso dhexdhigo madaxdii Shirkadda dhexdooda asaga oo labo kooxood u kala jabiyey mid walbana war gooni ah u sheega iyo isagoo Shirkadda iyo dowlada federaalka iyo khaasatan Cabdisaciid Muuse Cali-Koor oo shirkada iyo hawlaheeda u hagar baxayey marwalba oo wax looga baahdo warar been abuur ah suuqa u geliyey ciyaalka xaafadana u adeegsaday.
Wararka hoose ee aan Shirkadda ka helayno waxay sheegayaan in Cali-Siciid Faadi diginin kama danbays ah la siiyey loona sheegay in uusan mardanbe dhex roorin hawlo asaga ka waaweyn oo u dhexeeya madaxda Shirkadda iyo dawlada federaalka oo waxbadan uga xiran yihiin.
Waxaanba sugnaa in Cali-Siciid Faadi dantiisa aqoonsado oo ku ekaado waajibaadka shaqadiisa ama Shirkadda dekedda dhisaysa ay tallaabo ka qaado ileyn WADAAGSAN maaha xarun xisbi siyaasadeed.
Inta la ogyahay shirkaddu ma rabto in loo adeegsado mowjadaha siyaasada oo wakiilada DP World ee Puntland soo afuufayaan dhex gasho oo halkaas dhibaato weyni ka soo gaadho.
DEG DEG:-Madaxda Dowladda iyo maamul Goboleedyada oo shir u furmay